मतदान गर्न पाउनु पर्छ, नत्र स्ववियु निर्वाचन बहिस्कार गरिन्छ – सम्झना खत्री – ToplineKhabar
सेती अञ्चल, कैलाली जिल्ला घोडाघाडी गा.वि.स मा जम्मनुभएकि सम्झना खत्री, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय तारानगरको एकाई समिति सभापतिमा निर्वाचित भएपछि उनको राजनीतिक यात्रा सुरुभएको थियो । २०६५ सालमा सचिवमा प्रतिसपर्धा गदै नेपाल विद्यार्थी संघ कैलाली जिल्लाबाट क्षेत्रीय सदस्य, कैलाली जिल्ला कोषाध्यक्ष हुदै केन्द्रिय सदस्यमा पदमा २ मत अन्तरले पराजित भएपनि दृढ संकल्पका साथ आफ्नो राजनीतिक बाटोमा अनवरतरुपले हिडिरहनु भएकी योद्धा सम्झना खत्री सँग बर्तमान विद्यार्थी आन्दोलनका समस्या र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहि टपलाईन खबरकालागि प्रदिप भट्टले गरेको कुराकानी –
माओवादी युद्धको कैलाली जिल्लामा राम्रो छाप थियो, तर पनि तपाई ने.वि संघ प्रतिनै आस्थावन बन्नु भयो किन ?
हो, त्यति बेला माओवादी युद्धको कैलाली जिल्लमा पनि राम्रो छाप थियो । हामि संगका कयौं साथीहरुलाई माओवादी युद्धमा स्वयम माओवादीका कार्यकर्ता आएर लग्थ्ये । राज्य व्यवस्थको चर्को ओचन गर्थे । तर पनि म माओवादी बनिन् । मेरा परिवारका सदस्यहरु र आफन्तहरु सबै बिपीको शिद्धान्तबाट प्रभावित थिए । मैले पनि बिपीका शिद्धान्त पढे अनि गणेशमानको आदर्शबाट प्रभावित भएपछि मैले ने.वि संघ प्रतिनै आस्था राखे ।
तपाईले आफ्नो घर नजिकको सु.प विश्वविद्याल छोडेर त्रि.वि केन्द्रिय क्याम्पसनै किन रोज्ने भयो ?
सुदुर पश्चिम विश्विद्यालय कैलाली जिल्लामा नभई कञ्चनपुर जिल्लामा पर्ने भएकाले मैले घर छोडेर कोठा लिएर बस्नु पर्ने बाध्यता अर्को सानै देखि केन्द्रिय क्याम्पसमा पढ्ने चाहना थियो । राष्ट्रिय राजनीति बुझन् सजिलो हुने , आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउन सजिलो हुनेभएकाले आएकि थिए तर विडम्बना भन्नु पर्छ ८ –८ बर्ष सम्म स्ववियुको चुनाव हुन नसक्नु र समयमा त्रि.वि समिति फर्मेसन हुन नसक्नुले राजनीतिक नेतृत्व जाममा परेको छ । आसा छ स्ववियु निर्वाचन पछि यो चक्काजाम हट्ने छ ।
तपाई सेमेष्टर पढ्दै हुनुहुन्छ । बार्षिक प्रणालि र सेमेष्टर प्रणालिमा फरक के पाउनु भएको छ ?
बार्षिक प्रणालिमा विद्यार्थीहरुको चापले गर्दा भनेजस्तो गुणात्मक शिक्षा दिन सकिराखेको अवस्था थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नियमित नआउने, प्राईभेट पढ्ने राजनीतिको प्रमुख आँकडा बनि राख्ने त्रि.वि अहिले सेमेष्टर प्रणालिमा आईसकेपछि कोर्स डिजाईन देखि लिएर शिक्षक विद्यार्थि विचको नियमित भेटघाट, नियमित कक्षा संचालन र प्रोजेक्टर प्रणालिबाट पठनपाठन भईरहेको छ ।
प्राइभेट विद्यार्थी र हेलमेट शिक्षकहरुको बिगबिगी नियन्त्रण भएको छ । समयमै सेमेष्टर प्रणालिमा परिक्षा संचालन भईराखेको छ । बार्षिक प्रणालि भन्दा सेमेष्टर प्रणालिमा केहि सुधार देखिन्छ ।
तपाईले चौंथो सेमेष्टर सक्काउनु भयो । नियमित विद्यार्थी भित्र पर्नु हुन्न । मतदान प्रकिर्यामा भागलिनु पाउनु पर्छ भन्नु तपाईको गैर जिम्मेवार पना हौईन र ?
कसरि गैरजिम्मेवार भन्नु हुन्छ, त्रि.वि केन्द्रिय क्याम्पसमा सेमेष्टरको पहिलो ब्याज हाम्रो अहिले चौथो सेमेष्टरको थेसिस लख्दै छ । जस्ले संठनलाई बचाई राख्ने काम ग¥यो त्यसलाई गैरजिम्मेवार भन्न मिल्दैन । ठेक्कापट्टामा राजनीति बुझेको राम्रो विद्यार्थीलाई पाखा लगाईदै छ । त्यस्तो गरिनु हुन्न , नियमित प्रकिर्यामा भर्ना खोल्नु पर्ने अवस्थामा त्रि.वि प्रशासनले विद्यार्थीको अधिकार कुन्ठीत गरेको छ । त्यसका विरुद्धमा अन्यायमा परेका आम विद्यार्थीहरुको मोर्चा बन्दै छ र संघर्षमा उत्रिने प्रणय गरेका छांै । भर्ना खोलेर विद्यार्थीको मतदान अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर स्ववियु निर्वाचन हुनु पर्दछ । नत्र वहिस्कार गरिन्छ ।
तपाई सिन्डिकेट प्रणालिको पक्षधर हो अथवा विरोधि के हो ?
म सिन्डिकेट प्रणालिको विरोधि हो । सिन्डिकेट प्रणालि तोडिनु पर्छ । सबै संगठनहरुको आ– आफ्नो अस्तित्व हुन्छ । तीन ओटा संगठनको दादागिरी ताडिनु पर्छ । एकलौटि निर्णय गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा नभएकाले सबै विद्यार्थीहरुको मागलाई सम्मबोधन गरिनु पर्छ र मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । अनि मात्र चुनाव सम्भव छ नत्र छैन ।
ने.वि संघले २८ बर्ष भित्रको उमेदवारले स्ववियु चलाउन सक्दैन भन्ने गरेको सुनिन्छ तपाई के भन्नु हुन्छ ?
साच्चिकै भन्नु पर्दा नेपाल विद्यार्थी संघमा दर्दनात्मक अवस्था श्रीजना भएको छ । लोकतन्त्र माथिको प्रहार, स्वतन्त्रता र समानताको हकलाई मिचेर पार्टीले निर्णय गरेको छ । यो आम विद्यार्थीहरुको न्याय विपरित छ । ७० बर्ष पुगेका १० कक्षा पढेकाले देश चलाउन सक्ने, डिग्री पढिरहेका विद्यार्थीले स्ववियु चलाउन नसकन्ने हुन्छ र ? जसले स्ववियु चलाउन सक्दैन भन्छ उसको त्यो गैरजिम्मेवार पना बाहेक अरु केहि हुनसक्दैन ।
कन्द्रिय कमिटि र कार्यकर्ताहरु बिचको तालमेल नहुनुको परिणाम हो भन्न मिल्छ ?
सम्मबन्ध नभएको होईन, सम्मबन्ध छ । पार्टी लोकतान्त्रिक निर्णय गर्दा चाँहि अप्रजातान्त्रिक तरिकाले ग¥यो भन्ने मेरो बुझाई हो । किनकि विद्यार्थीका समस्या के हुन भनेर बझेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । विद्यार्थी माझ छलफल,सहभागि गराउनु पर्दथ्यो । तर प्रयास भएन । सिधै केन्द्रिय कमिटिले विद्यार्थी माथि निरङकुशता मात्रै लाद्ने काम ग¥यो । त्यसको विरोध हामिले गरिराखेका छौं ।
अखिल क्रान्तिकारीले ल्याएको २८ बर्षे उमेर हदबन्दी र मिश्रीत प्रणलि एकदम स्वागत योग्य छ । यो स्वगत योग्य मात्र नभई वैज्ञानिक पनिछ । विद्यार्थीको नेतृत्व विद्यार्थी स्वयमले गर्नु पर्दछ । यो निर्णयले विद्यार्थी राजनीतिमा देखिएको अवरोध हट्ने छ । समयमै निर्वाचन हुनेछ । विद्यार्थीका समस्या विद्यार्थीले नै बुझनेभएकाले नियमित विद्यार्थी भित्रकै नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
यहि परिस्थितिमा चुनाव सम्मभव देख्नु हुन्छ त ?
तीन ठुला संगठनहरु विच सहमति भईसकेको अवस्था भएकोले चुनाव हुन्छ र सम्भव पनि छ । मैले उपकुलपति तिर्थ खनियालाई फोन गरेर सोधे उनले भने संगठनहरुको सहमति भईसकेकाले निर्वाचन हुन्छ । बरु तयारि गर्नु होष ।
चुनावको सेरोफेरोमा मात्र विद्यार्थीका समस्या के छन भनेर हुन्छ । अघिपछि त्यो देखिदैननि ?
यो साँचो कुरा हो । यदि विद्यार्थीहरु संगको निरन्तर संवाद हुन्थ्यो भने संगठनको यो अवस्था आउने थिएन । अहिले नेपाल विद्यार्थी संघमा आस्थावान विद्यार्थी कति छन भन्दा संगठनलाई थाहा छैन । यो संगठनको कम्जारि हो । सेमेष्टरमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन । सेमेष्टर प्रणालिका समस्या के छन भनेर कुनै सेमिनार गोष्ठी चलाएको छैन । अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर समस्या केहुन भन्दा विद्यार्थीहरुले नेपाल विद्यार्थी संघ प्रतिको जो पहिलेको आस्था थियो त्यो गुमाएको छ ।
ने.वि संघको ८ बर्ष यता संगठन छैन भन्छन के यो साँचो हो ?
हो, यो साँचो हो । केन्द्रको विवादका कारणले त्रि.विमा संगठन विस्तार गर्न सकिएन । प्रतिक पौंडेल केन्द्रिय अध्यक्ष हुदा ६ महिना भित्र महाधिवेशन गर्न आएको रन्जीत कर्णको कमिटिले ४ बर्ष खानु, संगठनलाई उचित निकास दिन नस्कनु, सामानान्तर कमिटिका लागि अनेक खाले पत्र काटिनुले संगठनलाई मजबुद बनाउन सकिएन । र हाम्रो आधिकारिक कमिटि नहुदा हामिले संगठनात्मक गतिविधि गर्न सकेनौं ।
संगठनले विद्यार्थी माझ राखेका एजेण्डाहरु के के हुन ?
शैक्षिक परिवर्तनकालागि व्यवसायिक शिक्षा आजको अपरिहार्यता ।
शैक्षिक माफिया, कालो बजारी अन्त्य हाम्रै पालामा सम्मभव छ ।
रोजगारमुलक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकर्ता दिईने छ ।
एजेण्डा राम्ररा लागु कहिले नहुने किन ?
स्ववियु सभापति नै पार्टीको एजेण्ट भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस त, नीति निमार्णको पक्ष निकै बलियो कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो, नीति निमार्णको पक्ष बलियो भयोभने एजेण्डा राम्रा हुनेनै भए तर कार्यान्वयन नहुने कारण भनेको स्ववियू सभापति जब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचित हुन्छ । उ पार्टीको ठेकेदार बन्छ । पार्टीको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी राजनीतिमा पर्दा राम्रा एजेण्डाहरु लागु हुदैनन् ।
विद्यार्थीलाई राजनीतिको ढाल बनाउने तपाईहरु नै अनि यि एजेण्डाको के अर्थ ?
हामिले विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिको ढाल बनाएका हैनौं । यो बुझ्नु जरुरि छ । राजनीति हजारौले गर्ने नभईकन राम्रो कुशल व्यत्ति वा पात्रले गर्न हो । त्यसकारण ढाल बने भन्दापनि ढाल आफै बनिरहेको त छैन भनि बुझ्नु जरुरी छ ।
त्रि.विमा ने.व संघ जित्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
म एकदम विश्वस्त छु । लामो समय सम्म ने.वि संघको कुनै कमिटि थिएन । तर आसन्न निर्वाचनको तयारि गदै गर्दा आस्थावान सार्थीहरुलाई एकजुटको लागि आवहान गर्दा जो मास हामिले देख्यौ, त्यसले हामिलाई जित्नेमा हौसला बढाएको छ ।
← आँखाका लागि गाजर राम्रो कि अंगुर ?
चुनावमा पार्टीका च्याँखेदाउ →